Qorshaha Jose Mourinho Ku Qaban Doono Salah, Mane & Firmino, Dhibaatada Difaaca Ee Haysata Iyo Sida Uu U Kala Xulan Doono Xiddigaha Uu Haysto | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(15-12-2018) Manchester United ayaa Axadda safar ugu tegaysa Liverpool oo kulankooda ugu horreeya xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League ay foodda isku dari doonaan garoonka Anfield.
Ciyaartan oo laysku raacsan yahay inay tahay midka ugu weyn ee dalka Ingiriiska marka laga fiiriyo xafiiltanka, taariikhda iyo colaadda labada naadi ee guulaha ugu badan ka gaadhay horyaalka dalkaas, ayaa waxa ay kusoo beegantay maalmo kaddib markii ay Manchester United diiwaangashatay khaladaad halis ku ah xili ciyaareedkooda oo ay sameeyeen difaacyahannadu.
Kooxda Mourinho ayaa waxay Arbacadii la ciyaartay Valencia, waxaana gool qurux badan iska dhaliyey difaaca Phil Jones kaasina waxa uu sababay in United ay kaalinta labaad ka gasho groupkeeda oo Juventus ay ka dambayso.
Difaaca hore ee Blackburn Rovers ee Phil Jones waxa uu kusoo bilowday ciyaarta iyadoo uu garab taagan yahay Eric Bailly oo kaga wanaagsanaa bandhiggii garoonka gudihiisa ee habeenkii
Victor Lindelof iyo Chris Smailling ayaa ahaa xulashada Jose Mourinho ee khadka difaaca laakiin labadooduba way dhaawacan yihiin, waxaanay taasi fursad siisay Bailly iyo Jones oo noqday labada laacib ee kaliya ee booskaa ka ciyaara ee uu haystay tababaraha xamaasadda badan.
Kulankii Fulhaam, tababare Jose Mourinho waxa uu iska garab ciyaarsiiyey Smalling iyo Jones, laakiin ciyaartii Arsenal waxa uu khadkiisa dambe waxa uu door biday inuu ku ciyaaro saddex daafac oo ay iska garab ciyaraan Bailly, Marcos Rojo iyo Smalling, laakiin labada dambeba ma haystaan fursad ay garoonka ku yimaaddaan kulanka Axadda ee Liverpool sida ay wararka hordhaca ah sheegayaan, waxaana la sugi doonaa illaa daqiiqadda ugu dambaysa haddii ay soo laaban karaan.
Haddii ugu dambayn Mourinho lagu wargeliyo in Rojo, Lindelof ama Smalling aanay xaadir u noqonaynin, waxa uu helayaa madax xanuun xulasho oo khadka difaaca ah, isagoo la ogyahay inuu qaadan karo go’aamo adag oo ay u badan tahay inuu kaydka geliyo Phil Jones.
Sida ay warbixintani sheegtay, Jose Mourinho waxa uu difaaciisa ka dhigan doonaa Nemanja Matic iyo Bailly oo uu 5&4 ka ciyaarsiin doono, waxaanay ka hor tegi doonaan Mohamed Salah iyo Roberto Firmino oo ay qabashadoodu adag tahay.
Haddii uu go’aankan qaaato, waxa u fududaan doonta Tababare Jurgen Klopp inuu dhexdooda fursad ka helo isaga oo Salah iyo Firmino marba mid dhinaca midig geynaya, halka uu Mane garabka bidix kasoo geli doono.
Haddaba, akhriste sidee ayey kula tahay in tababare Mourinho usoo xulan karo shaxdiisa difaaca haddii ay xiddigaha aynu sare ku soo sheegnay fursad u heli waayaan kulankan?